Madaxweynaha oo wakiilada beesha caalamka uga warbixiyay hannaanka doorashada dalka. | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Madaxweynaha oo wakiilada beesha caalamka uga warbixiyay hannaanka doorashada dalka.
Madaxweynaha oo wakiilada beesha caalamka uga warbixiyay hannaanka doorashada dalka.
Previous articleBesha caalamka oo sheegay in seddex maamul-gobaleed ay ku xad-gudbeen qoodada haweenka.
Next articleSave the Children” Toddobadii ilbiriqsiba hal gabar oo da’deeda 15 jir ka yartahay ayaa la guursadaa”.